Madaxweyne Biixi iyo Somaliland: Qaran vs. Qabiil W/Q Abdinasir Xassan Muxumed
Friday, 16 November 2018 19:45
Kadib markii loo doortay madaxweynaha J.Sl mudane Muuse Biixi Cabdi, dalku waxa uu galay xaalad cusub oo taban. Marka laga yimaado xaalada Siyaasada arrimaha dibedda oo ay soo wajahday isbadallo siyaasadeed oo ka dhacay gobolka bariga Africa oo dhibaato laxaadle soo gaadhsiiyey meeqaamkii Somaliland ka taagneyd caalamka , waxa Iyana khatar ku jirta tii arrimaha gudaha. Waxaad moodaa in waxyaabo badan oo muhiim u ah jiritaaanka qaranku ay bilaabeen inay dib u noqdaan, taas oo ay ka mid tahay isku xidhnaantii bulshada (social integration). Iyada oo marmarka qaar aad is odhananyso waddankuba burbur ayuu qarka u saaran yahay. Hadaba maxaa u sabab ah? Ma madaxweynahaa ayey wax ka qaldan yihiin, mise meel kale ayay wax ka socdaan? Maxaa u gaar u ah xukumadda Muuse Biixi oo ay kaga duwan tahay xukumaddii hore oo sabab u noqon kara xaaladda kakan ee uu waddanku galay?
Shacabka Soomaalida ah ee reer Soomaalilanow, waxba idiin tari kari maayaan madax idin raali galisa. Waayo ma haysataan hab dhaqan nololeed oo wanaagsan oo ku haboon nidaamka wada-noolaanshaha umadnimo. Qaran ma nihin ee waxaan anahay dadyow kala qoqoban oo qaybsan oo waxaad u qaybsan tihiin qabiilo kibirsan oo iska wada horjeeda. Garanmaysaan macnaha dawladnimadu leedahay. Garan maysaan waxaad doonaysaan, hadana waad dhibaataysan tihiin, oo abaaro, fakhri baahsan, shaqo la’aan, waxbarasho xumo, caafimaad daro, waddo xumo, iyo dayac badan ayaan qabnaa. Eek a daaya madaxda daacadda ah ee raba inay wax idiin qabtaan amarka, aflagaadada, iyo mucaaraddada aan macnaha ku dhisneyn.
Hay’adaha waxaan u samaysanay in ay ina qorqoraan, ina hagaan, si looga baxo in marba qofkii joogaa uu dabcigiisa, shakhsiyadiisa, inagu hogaamiyo-taasi oo meesha ka saaraysa dan guud. Si ay I noogu suurto gasho hadafyadii aan ka lahayn dawladnimada, aan ku taageerno madaxweynaheena codka lagu doortay horumarinta dalka. Aan ku ixtiraamno in uu inoo shaqeeyo, mudo xileedkiisa kooban, inta uu dastuurka ku dhaqmayo.
W/Q Abdinasir Xassan Muxumed (p#58) 15/11/2018
More in this category: « Awooda Kuraasta Beesha Madaxwayne Muuse Biixi Leadership Crisis Caused Freeze of Statebuilding Efforts in Somalia »